2dii kursi ee Hirshabelle u harsanaa oo doorashadooda ka socoto Jowhar | Dhacdo
Home Wararka Maanta 2dii kursi ee Hirshabelle u harsanaa oo doorashadooda ka socoto Jowhar
2dii kursi ee Hirshabelle u harsanaa oo doorashadooda ka socoto Jowhar
Waxaa galabta Magaalada Jowhar dib uga bilaabatay doorashada laba kursi oo ka mid ah sideedda kursi ee Hirshabelle metelaadda ugu leedahay Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka.
Doorashada labadan kursi ayaa dib loo dhigay 18-kii bishii September, ka dib mid ka mida labadaasi kursi oo doorashadiisa ay ka socotay Magaalada Jowhar uu buuq hareeyay.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle, Cabdixakin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa sheegay in doorashada laga bilaabi doono halkii ay mareysay, oo ah in wareeggii 1aad dhammaaday. Afartii musharax ee tartameysayna saddexda ugu codka badneyd ay u soo gudubtay wareegga 2aad, kuwaa oo goor dhoweyd u tartamay wareeggii 2aad, waxayna kala yihiin Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Bashiir, Cali Shacbaan Ibraahim iyo Cabdalla Cabdi Xuseen.
Natiijada wareegga 2aad ee doorashada ayaa ku soo idlaatay Cali Shacbaan Ibraahim oo helay 54 cod, iyadoo Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Bashiir uu helay 31 cod, halka Cabdalla Cabdi Xuseen aanu wax cod ahi helin.
Waxaa hadda Magaalada Jowhar ka bilaabatay wareegga 3aad ee doorashada, oo ay ku tartamayaan labada musharax ee kala ah Cabdiqaadir Xanafi iyo Cali Shacbaan, waxaana wax dooranaya Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle.
Dhanka kale Kursiga labaad ee doorashadiisa caawa ka qabsoomi doonto Magaalada Jowhar ayaa waxaa ku tartamaya dumar oo keliya. Naciimo Ibraahim Yuusuf oo horey uga tirsaneyd Aqalka Sare ayaa waxaa kursigaasi kula tartami doonto Zamzam Cabdullaahi Axmed.
Haddii caawa lagu dhawaaqo natiijada kursigaasi labaad ayaa waxay ka dhigan tahay in Hirshabelle ay soo geba-gabeysay doorashada sideeddii kursi ee Aqalka Sare.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay ismiidaamin ka dhacday Degmada Baardheere
Next articleAbiy Ahmed oo xilka loo dhaariyay shanta sano ee soo socota